खाना खाना साथ यी काम भुलेरपनि नगर्नुहोस्::देश र जनताप्रति समर्पित
खाना खाना साथ यी काम भुलेरपनि नगर्नुहोस्
१. फलफुल नखानुहोस् :
खाना खानसाथ फलफुल खानुपर्छ भन्ने सुनिन्छ तर खाना खानसाथ फलफुल खान राम्रो हुँदैन यस्तो गर्दा पेट ढूस्स हुने लगायत ग्यास्ट्रिक को समस्या हुन सक्छ ।
२. चिया वा कफि नपिउनुहोस्
कतिपय चिया वा कफीको शौकिन हुन्छन् त्यसैले खाना पछि पनि पिउने गर्छन् जो शरिरको लागि हानिकारक हुन्छ । खाना खान साथ भूलेर पनि चिया वा कफि नपिउनुहााेस्।
कतिपय व्यक्तिलाई समयको कमी फुर्सद नहुनाले खाना खानसाथ नुहाउने गर्दछन् जून एकदम हानिकारक हुन्छ । यस्तो गर्दा पेटको चारैतर्फ रक्तसंचार बढि हुन जान्छ र पाचन प्रक्रिया सुस्त हुन्छ ।
४. धुम्रपान नगर्नुहोस्
धुम्रपान जुनसुकै अवस्थामा गर्दा पनि शरिरलाई नोक्सान गर्दछ । तर खाना खानसाथ धुम्रपान गर्नाले ज्यानै जान सक्ने खतरा हुन्छ । साथै यसले गर्दा क्यानसरको संभावना धेरै गुणा बढ्न सक्छ ।
नेपालमा धेरै व्यक्तिहरु बेरोजगारका कारण केही काम नहुने हुँदा खाना खानसाथ धेरै लाई सुत्ने बानि हुन्छ । यस्तो बानि ज्यादै खतरनाक हुन्छ । यस्तो गर्दा खाना राम्रो सँग पाचन हुन पाउँदैन यसले गर्दा मोटाउने, ग्यास्ट्रिकको समस्या हुन जान्छ ।
प्राचीन रानीहरु कसरी साैन्दर्य हुन्थे ? यस्तो छ राेचक रहस्य